हत्केलाको कुन रेखाले के संकेत गर्छ ? | Samajik Khabar
विवेकशीलका १३ नेता साझासँगको एकतामा सहभागी नहुने
माधव नेपालकोलागी अध्यक्ष छा्डने र सत्ता संकट टार्ने ओलीको रणनीतिमा नेपाल…
पुनः चार वर्षपछि ह्वाइटहाउस आउने ट्रम्पको दाबी
सचिवालय बैठकअघि प्रधानमन्त्री ओलीको बेग्लै छलफल
कतीमा हुँदै छ सुनको कारोबार
आज पनि बढ्यो सुनकाे भाउ , कतिमा हुँदैछ कारोबार
कती छ आजको सुनको भाउ
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार अघि बढ्दै
आज पनि घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कती पुग्यो
रोनाल्डोले पूरा गरे ७५० करिअर गोल
तेन्दुलकरको कीर्तिमान तोड्दै कोहली बने ओडीआईमा छिटो १२ हजार रन बनाउने…
दक्षिण कोरियामा श्रमिक लाने प्रक्रिया तत्काल शुरु हुँदै, रोस्टरको अवधि छ…
अमेरिका जान चाहने नेपाली आवेदकमध्ये करिब आधालाई भिजिटर भिसा प्रदान
बेलायतले खोल्यो वर्क पर्मिट, नेपाल बाट आउन पनि बाटो खुल्ला
Home अन्य हत्केलाको कुन रेखाले के संकेत गर्छ ?
हत्केलाको कुन रेखाले के संकेत गर्छ ?
हत्केलामा विभिन्न रेखा, चिन्ह वा आकृती बनेका हुन्छन् । जसको सम्बन्ध व्यक्तिको भाग्य, धन र ऐश्वर्यसँग समेत रहने गरेको छ ।
यदि कुनै ब्यक्तिको हत्केलामा जहाँ बुध वा शनि पर्वत बनेको हुन्छ त्यहा तराजूको निशान भए यस्ता ब्यक्तिले कहिल्यै धनको अभाव बेहोर्नु पर्दैन । यस्ता ब्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा निकै सफलता र धन कमाउने मान्यता छ । यस अलावा यस्ता ब्यक्तिको समाजमा राम्रो प्रतिष्ठा हुने गर्दछ ।
हत्केलामा शुक्र पर्वतको अत्यधिक महत्व रहने गर्दछ । शुक्र पर्वत राम्रो भए व्यक्तिले सबै सेवा, सुविधायुक्त आरामदायी जीवन बिताउने मान्यता रहेको छ । शुक्र पर्वतबाट निस्किएको कुनै रेखा सीधै सूर्य पर्वतमा पुगेर मिलेको छ भने यसलाई अझ शुभ फलदायी र भाग्यमानी मानिन्छ । यस्ता ब्यक्तिले राजयोग बराबरको सुख प्राप्त गर्दछन् ।
यदि कुनै ब्यक्तिको हत्केलामा मणिबन्धबाट निस्किएको रेखा एकदम स्पष्ट र सीधा शनि पर्वतमा पुगेको छ भने यस्ता ब्यक्ति भाग्यशाली र सफल मानिन्छन् । यस्ता ब्यक्ति धनवान् हुने मान्यता रहेको छ ।
जसको हत्केलामा अनामिका औलाबाट निस्किएको रेखा चन्द्र पर्वतमा मिसिएको छ भने यस्ता ब्यक्ति भाग्यशाली र धनी हुने मान्यता रहेको छ । यस्ता ब्यक्ति उपर देवी लक्ष्मीको कृपा रहने मान्यता छ ।
यदि मणिबन्ध जसलाई भाग्य रेखा समेत भनिन्छ यहाँबाट कुनै रेखा निस्किएर शनि पर्वतका अलावा बुध पर्वतमा मिसिएकोा छ भने यस्ता ब्यक्ति अत्यन्त भाग्यशाली मानिन्छन् । यस्ता ब्यक्ति ब्यापारमा सफल र समाजमा प्रतिष्ठित मानिन्छन् ।
Previous articleआजको राशिफल : २०७७ कात्तिक १३ गते बिहीवार
Next articleविश्वभर एकैदिन ५ लाखभन्दा बढीमा संक्रमण, ७ हजार बढीको मृत्यु
बाघले मान्छे खान थालेपछि स्थानीय त्रसित
अब निकै सस्तो मूल्यमा आउँदै नयाँ मोडलको ‘बुलेट बाइक’
प्राविधिकको डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहको परीक्षा पुष १८ गते बाट
Sujata Acharya - Modified date: December 3, 2020